डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै डडेल्धुराबासी सडकमा « News of Nepal
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७औं चरणको अनशन पाँचौ दिन पुग्दासम्म सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै शुक्रबार डडेल्धुराबासीहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाइ सके पश्चात कोण सभाको आयोजना समेत गरिएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधीकारी पौडेलले डा. केसीको मागप्रति एक्यबद्धता जनाउदै माग सम्बोधन गराउनका लागि आफुले सक्दो पहल गर्ने बताए । स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल हुदै गएका सत्याग्रही डा. केसीका सबै मागहरु न्यायोचित रहेकाले उहाँको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउछन । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको मागगर्दै दाबाबमुलक र्‍याली निकालिएको र सरकारले माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरेमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने र्‍यालीमा सहभागी स्थानीय समाजसेवी पदमा गुरुङले बताइन । दबाब ¥यालीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सासंद तथा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ल समेत सहभागी थिए । बिहिबार पनि नागरिक समाजको अगुवाइमा डडेल्धुरा सदरमुकाममा र्‍याली निकालिएको थियो ।
शुक्रबारनै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा छाया सरकारका गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अनशनरत डा.केसीलाई भेटेका छन् । शुक्रबार दिउँसो अनशनरत केसीलाई भेटेर उनले अनशनप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएका हुन् । उनले डा. केसीको अनशनप्रति आफ्नो र पार्टीको सुरुदेखि नै समर्थन रहेको बताए । केसीले उठाएका मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सबैले पढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज भएको नेता बडूले बताए । उनले डा.केसीले पठाएका सात बुँदे मागहरु सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे ।
अत्यन्तै चिसोठाँउमा सत्याग्रहमा बस्दा डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या थपिदैं गएको डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले बताए । उनले पिसाबमा संक्रमण बढ्दै गएको र रक्तचाप न्युन हुँदै गए पनि चोथो दिनको तुलनामा पाँचौ दिन सुगरको मात्रा भने केहि घटेको जानकारी दिए ।